5 siri ike egwuregwu maka gam akporo na ị ga-agbalị | Androidsis
5 siri ike gam akporo egwuregwu ị ga-agbalị
Aaron Rivas | 13/11/2021 08:00 | Egwuregwu gam akporo, Mobiles
Mgbe ụfọdụ egwuregwu dị mfe ma dị mfe bụ ihe kachasị mma iji dọpụ uche gị ma nọrọ oge ahụ n'ụzọ na-atọ ụtọ. Otú ọ dị, ha nwere ike na-agwụ ike n'ikpeazụ n'ihi na ha adịghị eweta nnukwu ihe isi ike na-achọ oge na nkà. Nke a na-adaberekwa n'ụdị ọkpụkpọ; e nwere ndị na-enwekarị mmasị na egwuregwu dị mfe.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-ahọrọ egwuregwu siri ike na mgbagwoju anya, ebe a, anyị na-ahapụ gị nchịkọta egwuregwu kacha mma na ụdị a, ka i wee gbalịsie ike imeri ha ma nwee ihe na-atọ onwe gị ụtọ mgbe niile. Gaa maka ya!
N'okpuru ebe ị ga-ahụ a ọnụ ọgụgụ nke kasị mma siri ike egwuregwu maka gam akporo smartphones. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama, dị ka anyị na-eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na nke a chịkọtara post bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
4 Ọrịa inc
Duet bụ egwuregwu hypnotic nke ụmụ irighiri ihe abụọ na-aga n'akụkụ dị iche. Maka ndị a, nke a na-akpọ "ụgbọ mmiri", ị ghaghị ịchịkwa ha mgbe niile, nke na-adịghị mfe, n'agbanyeghị na mmegharị ha na-emekọrịta ihe, na-eme ka egwu egwu ebighị ebi.
Ebe ị ga-emerịrị gbanahụ ihe mgbochi niile na-apụta n'ụzọ, nke na-adịghị ka ọ ga-akwụsị na, dị ka ị nwere ike ịtụ anya, ọ na-enwekwu mgbagwoju anya ka ị na-aga n'ihu na egwuregwu ahụ. Jiri ntụgharị uche gị wee nyochaa mmegharị gị niile n'ime ihe dị ka milliseconds.
N'ihi na Geometry Dash bụ egwuregwu a na-akwụ ụgwọ, anyị etinyeghị ya na nbipute mkpokọta a. Ka o sina dị, Geometry Dash SubZero Ọ bụ ihe dị iche iche nke otu onye nrụpụta na a na-ekewa ya dị ka otu n'ime egwuregwu kachasị ike maka gam akporo, nyere ọkwa niile na ụwa ọ nwere, nke ji nwayọọ nwayọọ na-agbagwoju anya dabere na ọganihu e nwetara n'ime egwuregwu ahụ.
Dị ka Geometry Dash nke mbụ, ọ na-egosipụtakwa eserese na-eme ka uche na mmetụta pụrụ iche. N'otu oge ahụ, ụda ụda na-atọ ụtọ n'ezie na nke ukwuu, n'ihi ya, ọ bụ ezigbo ahụmahụ ige ntị nke ọ na-enye. Mana ka anyị ruo n'isi okwu... O siri ike n'ezie, n'agbanyeghị na ọ nweghị ọkwa dị ka Geometry Dash n'ihi na ọ bụ n'efu. Otú ọ dị, ọkwa atọ nke ọ nwere na-abụkarị ihe zuru ezu iji kpọọ na ntụrụndụ ruo ogologo oge, yana egwu MDK, Bossfight na Boom Kitty !, ahụmahụ egwuregwu dị mma.
N'aka nke ọzọ, Enwere ike ịhazi agwa ya na akara ngosi subzero pụrụ iche iji kpọghee. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike imeri ọkwa ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịme ihe na usoro ọzụzụ, nke ị nwere ike imeziwanye nkà gị ma, n'ụzọ dị otú a, na-amụba echiche gị na ọsọ ọsọ mgbe ị na-ezere ihe mgbochi.
Developer: Egwuregwu RobTop
Nke a bụ egwuregwu kwụ ọtọ mara mma. N'ezie, ọ dị ihe karịrị 9MB. Ka o sina dị, o nwere nnọọ ihe na-akpali na mgbagwoju anya egwuregwu ike. Ma ọ bụ na, ịmalite, na mmalite ọ bụ ihe siri ike ịchịkwa àgwà ahụ, nke ị ga-agbapụ mgbe niile iji kpochapụ ndị iro na, ọ bụrụ na ha emetụ gị aka, na-ebibi gị. Ihe ọzọ bụ na ị ga-ezere ihe ndị dị ize ndụ na-egbu ndụ gị, niile n'otu oge ahụ.
Na nke a ga-agbakwunyere eziokwu ahụ bụ na ihe na-adịwanye mgbagwoju anya, nke mere PewPew na-adabakwa n'ụdị egwuregwu siri ike. Ka o sina dị, ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ bụkwa ihe mgbawa zuru oke na ọkwa nke eserese na mmetụta anya, n'ihi na ọ mara mma nke ukwuu; ọ ga-eme ka ihuenyo gị na-egbuke egbuke mgbe niile.
N'otu aka ahụ, na egwuregwu enwere ike na ike dị iche iche ga-eme ka ị gbaa ọtụtụ ebe, nke mere na, n'ụzọ dị otú a, enwere ike ikpochapụ ọtụtụ ndị iro n'otu oge ma mebie karịa.
Akụkụ ọzọ nke na-eme ka PewPew bụrụ ihe na-adọrọ mmasị na ọkwa eserese bụ na ọ nwere ọnụ ọgụgụ FPS dị elu (frames kwa nke abụọ), nke na-eme ka ọhụụ ahụ dịkwuo mma. N'echiche a, ekwesịrị ịmara na ọ nwere eserese retro.
Dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu niile, Plague Inc dị mfe na mbido. Mgbe ahụ, ọ na-akawanye mgbagwoju anya, ruo n'ókè na ọ bụ otu n'ime egwuregwu kachasị ike maka gam akporo, nke mere anyị ji tinye ya na ndepụta a.
N'ebe a nje, nje bacteria ma ọ bụ ero ga-emecha mebie mmadụ niile. Ihe siri ike bụ mgbe ọ na-agbalị ime ihe ọjọọ ihu ma ha na-achọ ọgwụ mgbochi. Ọrụ gị bụ igbochi ha ịchọta ya na ibunye ihe niile ka ndị mmadụ wee daa kpamkpam.
N'ezie ị gaghị atụ uche a agha royale dị ka PUBG Mobile, otu egwuregwu kachasị mgbagwoju anya nke mejupụtara agha na agbapụ ebe niile. Ma ọ bụ na aha ndị ọzọ dị ka Call of Duty Mobile ma ọ bụ Free Fire nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ha, egwuregwu abụọ nke otu ụdị, mana na PUBG Mobile njikwa njikwa ngwa agha dị ntakịrị mgbagwoju anya, yabụ na ọ na-abụkarị karịa. siri ike mgbe agbapụ ndị iro n'ebe dị anya.
Na mbido, ma ọ bụrụ na ị na-egwu egwu na ọkwa dị ala, n'ezie ị gaghị enwe ọtụtụ ihe isi ike igwu egwu, mana nke a bụ ekele maka na na obere egwuregwu enwere ọtụtụ 'bots' nke na-eme obere mmebi ma dị mfe igbu. Emechaa, ka ị na-ebuli elu, ị ga-echekwu ndị ezigbo mmadụ ihu na, dị ka ọ dị na egwuregwu niile, ndị ọkachamara na-egwu ogologo awa kwa ụbọchị, yabụ mgbe ahụ ka ihe niile na-amalite isi ike. Tụkwasị na nke a, e nwere ọtụtụ bọtịnụ na njikwa, na ị ga-abụ onye nhazi oge niile iji merie egwuregwu.
PUBG Mobile: Emechaa
Developer: Ọkwa enweghi ngwụcha
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » 5 siri ike gam akporo egwuregwu ị ga-agbalị
Otu esi ebufe ngwa etinyere na gam akporo ọzọ
Otu esi ewepụ ego na PayPal na mkpanaka gị